Yakavanzika Policy Mugadziri | Yakakwira mhando & yepamusoro tekinoroji - Yakagara-Simba
Zuva Rinobudirira: Nyamavhuvhu 1, 2017
Ichi chiziviso chezvekuvanzika chinoratidzira zvakavanzika maitiro eEVER-POWER GROUP CO., LTD. uye webhusaiti yedu: https://www.ever-power.net. Ichi chiziviso chekuvanzika chinoshanda chete kune ruzivo rwunounganidzwa newebsite ino, kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira. Ichakuzivisa nezve zvinotevera:
Ndeupi ruzivo rwatinotora;
Iyo yakachengetedzwa sei;
Kuchinjwa kwemitemo kuchaziviswa sei;
Maitiro ekugadzirisa zvinonetsa pamusoro pekushandisa zvisirizvo zvemunhu data.
Information Collection, Use, uye Kugoverana
Isu toga tiri varidzi veruzivo rwunounganidzwa pane ino saiti. Isu tinongokwanisa chete ku / kuunganidza ruzivo rwamunotipa nokuzvidira kuburikidza neemail kana kumwe kunangana zvakananga kubva kwauri. Hatisi kuzotengesa kana kubvarura ruzivo urwu kune chero munhu.
Isu tinoshandisa ruzivo rwako kupindura kwauri, maererano nechikonzero chawakataurirana nesu. Hatizogovera ruzivo rwako kune chero wechitatu bato kunze kwesangano redu, kunze kwekunge zvichidikanwa kuzadzisa chikumbiro chako, semuenzaniso, kutumira odha.
Kunze kwekunge watikumbira kuti tisadaro, tinogona kukubata neemail mune ramangwana kuti tikuudze nezvembeu, zvigadzirwa zvitsva kana masevhisi, kana shanduko kune ino mutemo yekuchengetedza.
Kuwana kwako uye Kudzora Pamusoro peNhau
Iwe unogona kusarudza kubva kune chero ramangwana kutaurirana kubva kwatiri chero nguva. Iwe unogona kuita zvinotevera chero nguva nekutibata nesu kuburikidza neemail kero kana nhamba yefoni yakapihwa pawebhusaiti yedu:
Ona kuti data yatinayo chii nezvako, kana iripo.
Shandura / gadzirisa chero dhenda tinezvo pamusoro pako.
Itai kuti tibvise chero data yatinayo pamusoro penyu.
Taura chero kunetseka kwauinako nezvekushandisa kwedu data rako
Kuti ushandise iyi webhusaiti, mushandisi anofanira kutanga azadza fomu rekunyoresa. Munguva yekunyoresa mushandisi anodikanwa kuti ape imwe ruzivo (sezita uye kero yeemail). Ruzivo urwu runoshandiswa kubata iwe nezve zvigadzirwa / masevhisi pane yedu saiti iwe wakaratidza kufarira. Nesarudzo dzako, iwe unogona kupawo ruzivo rwemagariro (seyakafanana nehurume kana zera) nezvako, asi hazvidiwe.
Tinokumbira ruzivo kubva kwauri pafomu redu rekuraira. Kuti utenge kubva kwatiri, unofanirwa kupa ruzivo rwekuonana (sezita nekero yekutumira) uye ruzivo rwemari (senge kiredhiti kiredhiti nhamba, zuva rekupera). Ruzivo urwu rwunoshandiswa kubhadhara zvikonzero uye kuzadza maodha ako. Kana tichinetseka kugadzirisa odha, tinoshandisa ruzivo urwu kuti tibate iwe.
Isu tinogovana ruzivo rwehuwandu hwemagariro nevatikabatana navo uye vashambadziri. Izvi hazvibatanidzwe nechero ruzivo rwevanhu pachavo runogona kuratidza chero munhu wega.
Uye / kana:
Isu tinoshandisa kambani yekutumira kunze kutumira mirairo, uye kadhi kiredhiti kambani inogadzira kubhadharisa vashandisi vezvinhu uye masevhisi. Aya makambani haachengetedze, kugovera, kuchengeta kana kushandisa pachako ruzivo runowanikwa kune chero chinangwa chechipiri kupfuura kuzadza odha yako.
Isu tinobatirana nemumwe bato kupa mabasa chaiwo. Kana mushandisi akasaina masevhisi aya, tichagovana mazita, kana rumwe ruzivo rwekuonana runokosha kune wechitatu kupa masevhisi aya. Aya mapato haatenderwe kushandisa ruzivo runozivikanwa pachedu kunze kwechinangwa chekupa masevhisi aya.
Isu tinotora matanho ekudzivirira ruzivo rwako. Paunotumira ruzivo rwakakomba kuburikidza newebhusaiti, ruzivo rwako rwakachengetedzwa zviri zviviri pamhepo uye zvisiri pamhepo.
Kwese kwatinotora ruzivo rwakashata (senge kadhi rechikwereti data), iwo ruzivo rwunonyorwa uye runotumirwa kwatiri nenzira yakachengeteka. Unogona kuratidza izvi nekutsvaga yakavharika icon kuzasi kwewebhu browser, kana kutsvaga "https" pakutanga kwekero rewebhu peji.
Kunyangwe isu tichishandisa kunyorera kuchengetedza ruzivo rwakashata runofambiswa online, isu zvakare tinochengetedza ruzivo rwako kunze kwenyika. Vashandi chete ndivo vanoda ruzivo kuti vaite rimwe basa (semuenzaniso kubhadharisa kana kushandira vatengi) ndivo vanopihwa mukana kune ruzivo rwunozivikanwa. Makomputa / maseva atinochengetera ruzivo runozivikanwa pachedu anochengetwa munzvimbo yakachengeteka.
Isu tinoshandisa "makuki" pane ino saiti. Kuki chidimbu chedata chakachengetwa padhiraivho rakaoma revashanyi vesaiti kutibatsira kuvandudza kupinda kwako kune yedu saiti uye kuziva vanodzokorora vaiti vesaiti yedu. Semuenzaniso, kana isu tikashandisa kuki kukuziva iwe, haufanire kupinda mu password kanopfuura kamwe, nokudaro uchichengetedza nguva uri panzvimbo yedu. Cookies anogona zvakare kutigonesa kuteedzera uye kunongedza zvido zvevashandisi vedu kuwedzera kwavo ruzivo pane yedu saiti. Kushandiswa kwekuki hakuna nzira yakabatana nechero ruzivo rwunozivikanwa pane yedu saiti.
Vamwe vatinoshanda navo bhizinesi vanogona kushandisa makuki pane yedu saiti (semuenzaniso, vanoshambadzira). Nekudaro, isu hatina mukana wekuwana kana kudzora pamusoro pemakuki aya.
Iyi webhusaiti ine zvinongedzo kune mamwe masaiti. Ndokumbirawo muzive kuti isu hatisi ivo vane chekuita nezve zvemukati kana zvakavanzika maitiro emamwe saiti. Tinokurudzira vashandisi vedu kuti vazive pavanobuda panzvimbo yedu uye kuti vaverenge zvirevo zvakavanzika zveimwe saiti inounganidza ruzivo rwunozivikanwa.
Ongororo & Makwikwi
Kubva pane-nguva-yedu saiti yedu inokumbira ruzivo kuburikidza nekutarisa kana kukwikwidza. Kutora chikamu mune idzi ongororo kana kukwikwidza kuri kwekuzvidira zvakakwana uye unogona kusarudza kuita kana kusatora chikamu uye nokudaro kuburitsa ruzivo urwu. Ruzivo rwakakumbirwa runogona kusanganisira ruzivo rwemazita (sengezita uye kero yekutumira), neruzivo rwenzvimbo (senge zip code, zera remakore). Ruzivo rwekutaurirana ruchashandiswa kuzivisa vanokunda uye mibairo. Ruzivo rwekutsvagisa ruchashandiswa zvinangwa zvekutarisa kana kuvandudza kushandiswa uye kugutsikana kwesainzi.
Chero pese panogadziriswa zvinhu kuzviviso zvemukati taura kuti uchaudza sei vatengi.
Zvimwe Zvigadzirwa Sezvinodiwa neMutemo
Zvimwe zvakawanda zvinopihwa uye / kana zviitwa zvinogona kudikanwa semhedzisiro yemitemo, zvibvumirano zvepasi rese, kana zviitwa zveindasitiri. Zviri kwauri kuti uone kuti ndeapi mamwe maitiro anofanirwa kuteverwa uye / kana kuti ndezvipi zvimwe zvekuzivisa zvinodiwa. Ndokumbira utarise zvakanyanya nezveCalifornia Online Yakavanzika Dziviriro Mutemo (CalOPPA), iyo inowanzo gadziridzwa uye ikozvino inosanganisira yekuzivisa chinodikanwa che "Usateedzere" mamaki.
Kana iwe uchinzwa kuti hatisi kutevedza ino yekuvanzika mutemo, iwe unofanirwa kutibata nesu nekukurumidza paemail pa [email inodzivirirwa] .